Waxa Uu Camp Nou Meel Ku Saaray Messi, Xavi Iyo Iniesta Isaga Oo Gaadhay Guardiola – Benzema Oo Xalay Xog Weyn Qortay – Laacibnet.net
Waxa Uu Camp Nou Meel Ku Saaray Messi, Xavi Iyo Iniesta Isaga Oo Gaadhay Guardiola – Benzema Oo Xalay Xog Weyn Qortay
Weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Karim Benzema ayaa xog cajiib ah kasoo diiwaan gashaday kulankii ay kooxdiisu shalay guusha muhiimka ah kasoo gaadhay dhigeeda Barcelona ciyaar ka tirsanayd horyaalka La Liga.
Xogta layaabka leh ee uu Benzema soo sameeyay ayaa ah mid uu kaga gacan sarreeyo halyeeyada waaweyn ee Barcelona ee Lionel Messi oo kabtanka hadda ah iyo Andres Iniesta iyo Xavi Hernandez oo aan sharaxaad badan u baahnayn si fiicana loo garanayo.
Xogtaas ayaa ah inuu Benzema haatan yahay ciyaaryahanka kulan El-Clasico ah caawinta ugu badan kusoo sameeyay gegida Camp Nou taariikhda dhaw gaar ahaan 25-kii kulan ee ugu dambeeyay.
Karim Benzema ayay Camp Nou min lix caawimo kulamada El-Clasico ku wadaagaan tababaraha haatan ee Manchester City ee Pep Guardiola isagoo ka sarreeya Messi, Xavi iyo Iniesta oo min shan caawimo ku sameeyay kulamadaas Camp Nou.
Goolka uu shalay caawiyay Karim ayaa ahaa midkii uu baaska cajiibka ah u daba mariyay daafaca Barcelona gaar ahaan Gerard Pique da’yarka khadka dhexe ee Federico Valverde oo daqiiqadii 5-aad hoggaanka u dhiibay Los Blancos.
Xogtan oo ah mid laga helay shabakadda MisterChip ayaa caddayn buuxda u ah inuu Benzema ka duwan yahay weeraryahanada kale ee ay isku booska yihiin oo uu dib uga soo dego afka hore isla markaana baasas muhiim ah xaga dambe kasoo dhiibo.